Labo qof oo ku dhaawacantay qarax ka dhacay meel u dhow saldhiga booliiska Waaberi ee Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaLabo qof oo ku dhaawacantay qarax ka dhacay meel u dhow saldhiga booliiska Waaberi ee Muqdisho
July 12, 2016 Abdi Omar Bile Somalia, South-Central 0
Saldhiga booliiska degmada Waaberi ee Muqdisho.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan labo qof ayaa ku dhaawacantay caasimada Soomaaliya, Muqdisho caawa fiidkii kadib markii qarax uu ka dhacay meel u dhow xarun booliis, sida uu sheegay sarkaal.
Qaraxa ayaa ka dhacay meel u dhow xarunta booliiska degmada Waaberi ee Muqdisho.
Taliyaha ciidamada booliiska gobolka Banaadir, Bishaar Abshir Geedi oo la hadlay wakaalada wararka Soomaaliya (Sonna) ayaa sheegay in walxo qarxa oo lagu qarshay qashin ay ku qarxeen meel u dhow xarunta booliiska.
Ma jirto cid sheegatay masuuliyada qaraxa, balse kooxda hubaysan ee al-Shabaab ayaa horey u qaaday weeraro kan lamid ah.
Garoowe-(Puntland Mirror) Isku dhac ayaa laga soo sheegay gobolka Bari maanta oo Talaado oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyada ISIS. Isku dhaca ayaa yimid kadib markii cutubyo katirsan ciidanaka PSF ay weerar ku qaadeen [...]